Isolar DC Air Cooler Abakhiqizi nabahlinzeki - China Solar DC Air Cooler Factory
Ephathekayo solar DC air cooler XK-05SY
ISolar ingamandla amasha ezemvelo, iXIKOO iphishekela izinto ezintsha zobuchwepheshe nokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, Kuthuthukisiwe futhi kwakhiqizwa i-XK-05SY ephathekayo yelanga engu-24v DC epholile. futhi iyaphatheka evaporative emoyeni epholile, elula ukuhambisa nokwengeza amanzi. Ukubukeka Okuhle I-ABS entsha ...
ephathekayo solar ehlane DC emoyeni Ukupholisa fan XK-06SY
I-Solar ingamandla amasha ezemvelo, i-XIKOO iphishekela izinto ezintsha zobuchwepheshe nokonga amandla nokuvikelwa kwemvelo, Kuthuthukisiwe futhi kwakhiqizwa i-XK-06SY ephathekayo yelanga ehlane DC yokupholisa umoya fan. futhi iyaphatheka evaporative emoyeni epholile, elula ukuhambisa nokwengeza amanzi. Ukubukeka Okuhle ...
I-Solar ingamandla amasha ezemvelo, i-XIKOO iphishekela izinto ezintsha zobuchwepheshe nokonga amandla kanye nokuvikelwa kwemvelo, Kuthuthukisiwe futhi kwakhiqizwa i-XK-25 / 40C ye-solar energy DC air cooler. futhi futhi luhlobo lwewindi olupholile lomoya opholile, unepayipi lomoya nomoya osabalalisa umoya, ungafakwa ...